မ​သူေ​တာ် | မိုးစက်မှော်
Filed under: ရှင်းတမ်း/ကြော်ငြာ —2Comments	24/01/2011
စာ​မေ​ရးြ​ဖစ်တာေ​တာ​င်ြ​ကာြ​ပ​န်ေ​ပါ့၊ ခက်တ​ယ်… အချိန်အား​က မ​ရှိ၊ အချိန်ရှိြ​ပ​န်ေ​တာ့ ဖီ​လင်က မ​လာ… ဒါ​နဲ့​​ပဲေ​န့ေ​ရွှ့​ ညေ​ရွှ့​ မေ​ရးြ​ဖ​စ်… မေ​ရးြ​ဖ​စ်ေ​တာ့ ဘာြ​ဖစ်သ​တုံး၊ ဘာ​ညစ်သ​တု​န်း​လို့ေ​မး​လာ​ရ​င်ေ​တာ့ ဘာ​မှ​မြ​ဖစ်ပါဘူး၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ “ေ​မာင်ရ​င်ေ​ရး​တာေ​လး​တွေက မ​ဆိုး​ဘူး…ေ​ကာ​င်း​သား​ပဲ“ လို့ြေ​ပာ​တဲ့​လူတချို့ ရှိ​သ​လို “ငြ​ကွား… အပိုေ​တွ လျှော​က်ေ​ရးေ​န​တာ​“လို့ေ​မးေ​ငါ့​တဲ့ လူေ​တွ​လ​ည်း မ​ရှား​ပါ​ဘူး။ ဘာ​ပဲြ​ဖ​စ်ြ​ဖ​စ် ကျွ​န်ေ​တာ့်​ကိုေ​မ​တ္တာ​ထားြ​က​တယ်လို့​​ပဲေ​အာ​က်ေ​မ့​မိ​ပါ​တ​ယ်ေ​လ…။
ဆက်ရ​ရ​င် လက်က​သာ ကွန်ပျူ​တာ ကီး​ဘု​တ်ေ​ပါ်ြေ​ပး​လွှားြ​ပီး စာချ မေ​ရးြ​ဖစ်တာ​ကိုးဗျာ၊ အေ​တွး​နဲ့​​ကေ​တာာ့ေ​ရးေ​န​တာေ​န့​​တို​င်း​နီးပါး​ပါ​ပဲ၊ တ​ခါ​တေ​လများ တေ​န့​​ကို သုံး​ပု​ဒ်ေ​လာက်ကို အေ​တွး​နဲ့ေ​ရးချပစ်လိုက်တာ… အေ​တွး​နဲ့ေ​ရးေ​တာ့ ဘာြ​ဖစ်သ​လဲဆိုတော့ စာြ​ပီးြ​မန်တ​ယ်၊ေ​နာ​က်ြ​ပီး ဇာတ်လ​မ်းြ​ကွ​တယ်ခင်ဗျ။ တ​ခါ ကျွ​န်ေ​တာ်​က အေ​တွး​သမား​လ​ည်းြ​ဖ​စ်၊ အေ​တွးြ​မန်သူ​လ​ည်းြ​ဖ​စ်ေ​တာ့ ဇာတ်က သွက်သ​လား မေ​မး​နဲ့​…ေ​ကာ​င်း​မှေ​ကာ​င်း၊ ကို​ယ့်​ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ်တယ်လို့​ ထင်ထ​င်၊ မ​တတ်နို​င်ပါ၊ စိတ်ထဲ ရှိ​တာေ​တာ့ ရိုးရိုးသားသား ထုတ်ဖော်ြေ​ပာ​ဆိုပစ်ရ​မှာ​ပါ​ပဲ။
ြ​ပဿ​နာ​က အဲ​ဒီ​အေ​တွး​ဇာ​တ်ေ​တွ​ဟာ တ​က​ယ် အချိန်ရ​လို့ြ​ပ​န်ေ​ရး​မယ်လ​ည်း​ဆိုေ​ရာ ကြက်ပျောက်ငှ​က်ပျော​က်ြ​ဖစ်ကုန်တာဗျ၊ ဘယ်လို​မှ မ​ထွ​က်ေ​တာ့​ဘူး။ အေ​တွး​ဆိုေ​တာ့​လ​ည်း ရ​စ်ေ​ကာ်​ဒါ​နဲ့​ ဖ​မ်း​ထား​လို့​​လ​ည်း မ​ရ… ခက်လှချည်ရဲ့​… ခက်လှချည်ရဲ့​နဲ့​​ပဲ တ​ကယ်တ​မ်းေ​ရးချင်တဲ့​စိတ်က တား​မ​ရ ဆီး​မ​ရ ဆည်ကျိုး​သ​လိုြ​ဖစ်တဲ့​အခါ ကို​ယ့်​အေြ​ကာ​င်း​ပဲေ​ရး​မိြ​ပ​န်ေ​တာ့​တ​ယ်။ ဒါ​က အပိုင်ဆုံး ဆက်ဗဂျ​က်ြ​ဖ​စ်ေ​န​တာ​ကိုးဗျ။ မ​သူေ​တာ်​လို့ေ​ခါ်ေ​လ​မ​လား…။
အခု​တေ​လာ စာ​မေ​ရးြ​ဖ​စ်ေ​ပ​မ​ယ့်ေ​ဖ့စ်ဘုတ်ရဲ့ statusေ​န​ရာ​မှာ မ​တ်ေ​ဆ့ဂ်ျေ​လးေ​တွေ​ရးြ​ဖစ်တ​ယ်၊ အလုပ်က သ​တ​င်းေ​တွ ဖတ်ရ၊ သ​တ​င်းေ​တွ ဘာသာြ​ပန်ရ​ဆိုေ​တာ့ နိုင်ငံ​တကာက အေြ​ကာ​င်းအရာစုံေ​တွ ဖတ်ရ​တဲ့​အခါ ကို​ယ့်နိုင်ငံ​နဲ့​​ယှ​ဥ်ြ​ပီး စ​ဥ်း​စား​မိ​တာေ​လးေ​တွ ရှိ​လာ​တ​ယ်၊ အဲ​ဒါေ​တွ​နဲ့​ ပတ်သ​က်ြ​ပီး ပွ​င့်​ပွ​င့်​လ​င်း​လ​င်း ကို​ယ့်​အြ​မ​င်ေ​လးေ​တွေ​ရး​မိ​တ​ယ်။ေ​ရး​မိေ​တာ့ ဘာြ​ဖစ်သ​လဲ…။
ခု​နြေ​ပာ​သ​လို​ပါ​ပဲ… ခင်ဗျား ဒဿ​နေ​လးေ​တွ ကောင်းပါတယ်ဆိုြ​ပီး… သိပ်မြ​ကိုက်တဲ့ သေ​ဘာြေ​ပာ​တာ​ရှိ​တ​ယ်၊ ဘယ်လို​မှ မေ​နနိုင်သူေ​တွ ကြ​ပ​န်ေ​တာ့​လ​ည်း ဒီချာ​တိ​​တ်ကို န​ည်း​န​ည်းေ​တာ့ ပညာေ​ပး​ဦး​မှ ဆိုြ​ပီး ၀င်ဆုံး​မ​တ​ယ်၊ေ​ကာ်​မန့်ေ​ပး​တ​ယ်၊ တချို့​​က​လ​ည်းြေ​မှာ​က်ေ​ပးြ​က​တ​ယ်၊ မြှောက်ပေးသူတွေကတော့ တ​က​ယ့်​အေ​ရးကျရင် “ကျွ​န်ေ​တာ်​မ​ဟုတ်ဘူး… သူ သူ သူ​“လို့​ လု​ပ်နိုင်တာေ​ပါ့ေ​လ… စ​တာ​ပါ၊ ဘာ​ပဲြ​ဖ​စ်ြ​ဖ​စ် တ​ဖက်တ​လ​မ်း​က ကူညီေ​ပးြ​က​တယ်ပဲေ​အာ​က်ေ​မ့​မိ​ပါ​တ​ယ်။
ပြန်ဆက်ရ​ရ​င် န​ည်း​န​ည်းေ​တာ့ ၀​မ်း​သာ​မိတယ်၊ ရယ်မိတယ်။ ရယ်မိတယ်ဆိုတာ ပါးစပ်လေး ဟလိုက်တာကို ပြောတာပါ။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာ ရှိတုန်းက ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ အကြည့်များခဲ့တာကိုးဗျာ၊ အဲဒီမှာ ဇာတ်ဆောင်တွေက တခုခုကို စိတ်ညစ်၊ စိတ်ပျက်သွားရင် ဟက်ကနဲ တချက် ရယ်လိုက်ကြတယ်လေ၊ ပါးစပ်လေးဟပြီး “ဟ ဟ“ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလုပ်တယ်လေ၊ မချိပြုံးလို့ ဆိုရမလား။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်စိတ်နဲ့ သဘောမတွေ့တာလေးတွေ တွေ့ခဲ့ရင် အဲဒီလို လုပ်တတ်နေတယ်၊ အကျင့်တောင် ပါနေပြီ။
ဒီတော့ အပြင်မှာများ ကျွန်တော် အဲဒီလို ရယ်မိတာတွေ့ရင် သတိထားရမှာက “ဒီကောင် ငါတို့ကို မကြည်တော့ဘူး“ ဆိုတာပါ၊ ရယ်တယ်ထင်လို့ အကောင်းမမှတ်ကျလင့်လို့ သတိပေးတာပါ။ ဟဲ ဟဲ…။ ကုလားလူမျိုးတွေ ခေါင်းတခါခါ လည်တခါခါ လုပ်နေတာ ရက်စ်လို့ အနက်ထွက်သလိုပေါ့။ သိတယ်နော်… ကုလားလူမျိုးတွေက သဘောတူတယ်၊ လက်ခံတယ်၊ နှစ်ခြိုက်တယ်၊ စားမယ်ဆိုရင် ခေါင်းတခါခါ လည်တခါခါ လုပ်တယ်လေ၊ အဲဒါကို ကိုယ်က သူတို့အကြောင်း မသိတော့ ဒီကောင် ငါ့မကြိုက်ဘူးလား မသိဘူး၊ ငါပြောတာ လက်မခံဘူးလား မသိဘူးဆိုပြီး ပြောင်းပြန် စဉ်းစားမိမှာ စိုးလို့ ကြုံလို့ ထည့်ပြောလိုက်တာပါ။ သူ့လူမျိုး၊ သူ့ယဉ်ကျေးမှု၊ သူ့စရိုက်၊ သူ့အကျင့်ပေါ့လေ… ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ပျက်လေ… ပိုရယ်မိလေပါပဲ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်က အချစ်ဝတ္ထု သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေးတွေ ရေးချင်တာပါ၊ ခက်တာက ကိုယ်က မချစ်ဘူးတော့… တခါ အချစ်လည်း မခံရဘူးတော့ ရေးရတာ အသက်မပါသလို ဖြစ်နေတယ်၊ အသက်မပါမှတော့ ၀တ္ထုက သေနေမယ်လေ၊ ဇာတ်လမ်းက ရွှင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ လွမ်းစရာလည်း ကောင်းမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီဘက်ကို ကျွန်တော် လက်ရှောင်ထားလိုက်တယ်။
သတင်းဆာင်းပါးကျတော့လည်း အလုပ်အတွက်သာ ရေးဖြစ်တာလေ… သက်သက်အချိန်ပေးပြီး ရေးဖို့ကျတော့လည်း မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ်တွေ့လေးတွေ၊ ကိုယ်ခံစား သုံးသပ်မိတာလေးတွေကိုပဲ ချရေးဖြစ်တယ်။ ဒီမှာလည်း အဓိက က မေးခွန်းတွေပေါ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဖြေကြည့်ပြီး သူများတွေရော ဒီလိုတွေးကြသလားဆိုတာကို သိချင်လို့ ကျွန်တော်က တင်လိုက်တာပေါ့လေ၊ အဲဒီမှာ ဖတ်တဲ့သူတွေဆီကနေ ကိုယ်နဲ့တူတယ်၊ မတူဘူး တခုခု သဘောထားတုန့်ပြန်သံ ရမှာပဲလို့ ကျွန်တော်က ယူဆတယ်။
တချို့ကလည်း ဗြောင်ကို ပြောဆိုဝေဖန်တယ်ပေါ့၊ တချို့ကလည်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဆုံးမတယ်ပေါ့။ ချဲ့လင်လုပ်တဲ့အခါလည်း ရှိတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အပြန်အလှန် ပြောဆိုဝေဖန်ကြမှ တိုးတက်တယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။
တခါ စာရေးမယ်ဆိုတော့ သူများတွေ ဘာတွေ ရေးနေကြသလဲဆိုတာကိုလည်း လိုက်ဖတ်ရသေးတယ်ဗျ၊ ကိုယ်ကချည်း ထင်ရာ လျှောက်ရေးနေလို့ မဖြစ်ဘူးလေ၊ သိပ်တော်တဲ့သူများကျတော့ တမျိုးပေါ့လေ၊ သူတို့ကျတော့ တကူးတကတောင် စောင့်ဖတ်နေကြရတာကိုးဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ သာမန် ဒါမှမဟုတ် သာမန်အောက်အဆင့်လေးဆိုတော့ စာမပေါ့အောင် စာကျစာနကောင်းအောင် နည်းနည်းတော့ လေ့လာစောကြော ရသေးတာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား…။
ကျွန်တော်က လူတွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့ လူတွေအကြောင်း ရေးဖြစ်တာများတယ်၊ ဥပမာ ကိုယ့်အကြောင်း၊ ကိုယ့်အလုပ်ထဲက လူတွေအကြောင်း၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေအကြောင်း၊ နောက် အိမ်နဲ့ရုံးကြားက လူတွေအကြောင်း ဒါတွေကို မှတ်သားလေ့လာ ထူးအောင် မြင်အောင်ကြည့်ပြီး အာလူးနည်းနည်းရော ရေးရတာပေါ့ဗျာ။ ဟင်းချက်တဲ့အခါ ကြက်သားချည်းဆို ဘယ်စားကောင်းလိမ့်မလဲ၊ အီတီတီဖြစ်နေမှာပေါ့၊ အာလူးလေး သုံးလေးလုံးထည့်ထားလိုက်တော့ အဲဒီ အာလူးလေးကိုတောင် လိုက်လုစားရတယ်မို့လား။ အဲဒီလိုပေါ့ စာရေးတော့လည်း မြင်သမျှ၊ တွေ့သမျှချည်း ရေးပြတာထက်စာရင် နည်းနည်းလေး အပိုအလို ဖြည့်စွက်ခံစားပြီး အာလူးလေး၊ ဆားလေး၊ သကြားလေး ထည့်ရတာပေါ့။
တခါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောဖြစ်တာလေးတွေကို ပြန်ရေးဖို့လည်း စဉ်းစားမိတယ်၊ တခါတလေ ပြောဆိုတာတွေမှာ အများကြီး အနှစ်သာရ ပါတာတွေ ရှိနေတာကိုးဗျာ။ အဓိက ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမကြတာ များပါတယ်။ ကိုယ်က မကျေလည်ရင် ပြန်ပြန်မေးပေါ့လေ၊ မေးတဲ့အလုပ်ကလည်း ကိုယ့်အလုပ်လို ဖြစ်နေတော့ သူတို့မှာလည်း ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရင် တော်တော် အားစိုက်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ အမေးအမြန်းထူတာကိုးဗျာ… နော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ ကြွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ အဲဒီကျွန်တော့် အတွေးတွေကို ဖမ်းနိုင်တဲ့ ရစ်ကော်ဒါတလုံးတော့ လိုချင်မိတာပါပဲ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်။
နံနက် ၁၀ နာရီ။
2 Comments: စိုပြေ
16/02/2011 at 12:54 pm	ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒိလိုမျိုး ရစ်ကော်ဒါ တစ်လုံးလောက်လိုချင်ပါတယ်။ အကို့စာတွေကို တောင် လာမဖတ်ဖြစ်တာ ကြာသွားပြီ။ wordpress ကို ဖွင့်လို့မရတာလဲပါတာပေါ့။ အခု တော့ ဖွင့်လို့ရသွားပြီဖြစ်လို့ နောင်များလည်း အားပေးပါမယ်။ စာတွေ ဆက်ရေးပါဗျာ။
Reply	SU SANDAR ZAW
04/03/2011 at 3:39 pm	I m also want to write like that notes and articles.
But I don’t know what and how should I write.
I used to read other people’s notes wherever I saw especially on F/B.
Eventhough I don’t know how to write,but i still can know which one is nice to read or not.
Let’s me command about your writtern pattern!
Your writtern pattern is very active,but look like “talking way”, I mean you talk to someone directly.
I think should be “sa kar pyay” ,like “Thet Pan Mg Wa’s writting pattern”.
If I say something wrong,sorry for that.
« ချိုချဉ်မျက်နှာ ၂
ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် »